सात वर्षदेखि भुक्तानी पाउनबाट उखु किसान वञ्चित
पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानले चिनी उद्योगहरूलाई अघिल्लो वर्ष उधारोमा उखु दिएबापतको रकम अहिलेसम्म पनि पाउन सकेका छैनन् । चिनी उद्योगहरूले ०७५ सालमा करिब रु. ७० करोड र ०६९ सालमा उखु दिएबापत बाँकी रहेकामध्येको करिब रु. चार करोडको रकम अझै लिन बाँकी रहेको जिल्लास्थित उखु उत्पादक कृषक समितिको जिकिर छ ।
इन्दिरा सुगर मिल्सले ०७० सालमा करिब रु. १६ करोड र सोभन्दा अघिल्लो वर्षको करिब रु. चार करोड गरी रु. २० करोड किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उक्त समितिले जनाएको छ । यसैगरी ०७० सालमा लुम्बिनी चिनी उद्योगको करिब रु. १४ देखि १५ करोड र बागमती चिनी उद्योगले करिब रु. ३५ करोड किसानलाई तिर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ । समितिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवका अनुसार केही रकम उद्योगले आफ्ना बिचौलियामार्फत कम मूल्यमा किसानलाई रकम भुक्तानी गरे पनि अधिकांश सबै रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ । तत्काल रकम भुक्तानी नभए आन्दोलन गरिने उनी बताउँछन् ।
सरकारले उखुको प्रतिक्विन्टल मूल्य रु. ५३६.५६ पैसा निर्धारण गरेकामा चिनी उद्योगले किसानलाई प्रतिक्विन्टल ४७१ रुपैयाँ ३६ पैसा र सरकारले बाँकी रु. ६५.२८ प्रतिक्विन्टलका दरले यस वर्ष अनुदान दिइने जनाएको छ । चिनी उद्योगहरूले बक्यौता रकम भुक्तानी शुरु गरिसकेको जनाएका छन् । उद्योगहरूले अहिले प्राथमिकताका आधारमा किसानलाई खरिद पुर्जी संकलन गरी भुक्तानी दिन शुरु गरिसकेको उद्योगहरूको भनाइ छ । आफ्नो उद्योगले अहिलेसम्म करिब २० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिसकेको र अब पनि बाँकी रकम क्रमशः भुक्तानी गरिने योजना रहेको बागमती चिनी उद्योगका सञ्चालक राम थापा बताउँछन् ।
उनका अनुसार उद्योगलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले उद्योगमैत्री नीति बनाउन जरुरी छ । सुस्ता, प्रतापपुर र सरावल गाउँपालिकाको अधिकांश क्षेत्रमा उखुखेती गरिन्छ । पश्चिम नवलपरासीमा वार्षिक करिब १८ देखि २० लाख क्विन्टल उखु उत्पादन हुन्छ । जिल्लामा झन्डै १० हजार परिवार उखु खेतीमा संलग्न छन् । विगत वर्षदेखि जिल्लामा सात हजार पाँच सय हेक्टर जमिनमा उखु खेती हुँदै आएको छ ।